Ahoana no fomba ahafahana manova ny ao amin'ny Internet sy Offline Data
We use dozens of online services and applications every day to send and receive emails and text messages, make video calls, read news and watch videos online, and much more. And it’s extremely hard to keep track and secure the insane amount of data we produce …
Ny fametrahana ny rahona dia manova tsikelikely ny safidy eo amin'ny habaka. Ny tombontsoa avy amin'ny fitahirizana rahona dia: Access from multiple locations. Raha vao ao anaty rahona ny angon-drakitra dia azo aleha avy any amin'ny toerana rehetra izany. Manitatra na mifanaraka araka izay ilaina. Ny habetsahan'ilay fitahirizana rahona dia mety hitombo na hihena miankina amin'ny ...
Ireo hackers mivarotra ny Facebook teratany nangalarina ho an'ny 10 cents ho an'ny kaonty
Ny Facebook dia eo ambanin'ny mikraoskaopy hatramin'ny nipoahan'ny korontana ao Cambridge Analytica ary miezaka ny miatrika ny toe-javatra rehetra ny sehatra sosialy. Manampy ny fahasahiranana amin'ny tambajotram-piarahamonin'ny tambajotra sosialy manerantany, izay manana mpampiasa 2 miliara manerana ny ...
Ahoana ny fomba hanoratana ny iray mitondra fiara miaraka amin'ny Cryptomator
Ny ankamaroan'ny asa fitahirizana rahona dia manova ny angon-drakitra voatahiry ao amin'ny servers afa-tsy ny singa vitsivitsy tahaka ny Amazon Drive. Raha toa ka ahafahana manisy rakitra miafina amin'ny fandrahonana mifandraika amin'ny tsiambaratelo an-tserasera, ny fahafahana mampiasa ny lahatahiry fanoratana ny rahona fanalahidy dia ahafahan'ny pejin'ny mpampiasa ihany koa.
Nandeha tamin'ny alàlan'ny Facebook Settings aho, rehefa nahamarika aho fa ireo 80 apps dia manana ny fahazoan-dàlana hampiasa ny data Facebook. "Tsara ho azy ireo", nieritreritra aho fa mihoatra ny antsasak'izy ireo no hivarotra ny angon-drakitro any amin'ny orinasa mpanelanelana amin'ny aterineto. Facebook ...
Ahoana ny famerenana ny fampiasana ny data amin'ny Windows 10
Windows 10 dia mandeha amin'ny tablette, ny solosaina ary ny solosaina. Ny takelaka Windows 10 dia voafetra amin'ny tontolon'ny tontonana ankehitriny, saingy ny OS dia manana fepetra ilaina ho an'ny tompona tablette. Ireo mpampiasa Desktop koa dia manana fahafahana miditra amin'ireo endri-javatra ireo, na dia tsy dia ilaina loatra aza izy ireo ...
Hamafiso ny vnStat fa tsy mila manavao
Nisy olana ho ahy taorian'ny namoahana ny lahatsoratra navoakan'ny vnStat PHP, io console vnStat io dia tsy afaka manatsara ny volany. Ny vokatra dia ny vnStat PHP dia tsy afaka manatsara ny data automatique koa. Ny antony dia mety noho ny tsy nahafahako nihazakazaka fanavaozana vnstat ho root. Nefa ...
Gmail Script mba tsy hanoratra ny lisitry ny mailaka sy ny gazetiboky
Ny GNU officiel dia rindrambaiko misokatra ho an'ny Gmail mba tsy hanoratra ny lisitry ny mailaka sy ny gazetiboky semi-automatique. Raha tsy mitandrina ianao mikasika ny hoe iza no zaranao amin'ny adiresy mailakao, ny ambony dia mety ho afaka hitoetra amin'ny spam-ny daty farany. Iray amin'ireo olana lehibe ...
Ireo Databases NoSQL dia mety ho tombony ho anao manokana
Ny databolan'ny NoSQL dia manatsara ny fahombiazany, manatsara ny famokarana ecommerce, mety ho lafo kokoa noho ireo safidy hafa, ary afaka manatsara ny fitantanana angona lehibe. Raha fintinina, ny tombony ho an'ny fifaninanana manaraka eo amin'ny varotra ecommerce dia mety ho ny antontan-taratasinao. Ny tombontsoa manokana dia zavatra maharikoriko. Ohatra, taona vitsy lasa izay ianao ...
Ny segondra an-tsoratra ny rakitra dia tsy misy lanjany ao amin'ny Windows 10
Mety tsy hisy zavatra ratsy kokoa noho ny fiatrehana sarotra mivaingana amin'ny mety hampihenana ny angon-drakitra rehetra ao anatin'ny iray. Na dia amin'ny tranga maro aza, mety tsy hitondra fampitandremana izy, ny mpiserasera sasany dia nitatitra ny fahadisoana izay manampy azy ireo hahalala raha toa ka ...
AT & T mpividy miaraka amin'ny grandfathered Unlimited iPad Plans data dia mahita ny fanosihosena aorian'ny fampiasana 22GB
AT & T mpividy amin'ny grandfathered tsy voafetra ny iPad Data Plans dia manjavona rehefa avy namoaka AT & T ankehitriny ny mailaka ho an'ny mpanjifa izay manohy manana drafitra maimaim-poana momba ny angon-drakitra ho an'ny iPad, ary mampahafantatra azy fa ny fetra tsy voafetra dia nesorina tamin'ny volana Mey.
EaseUS Data Recovery Wizard: Fanamafisana ny vahaolana mahomby
Nodinihinay ny tranonkala maimaimpoana maimaimpoana nataon'i EaseUS Data Recovery Wizard. Izany no vahaolana mety ho an'ny fanarenana data. Raha efa nafahanao na nesorina ny rakitrao tao amin'ny ordinateranao, dia azo averina amin'ny fomba mahomby kokoa ny rakitrao. Ny dingan'ny famerenana dia tena ...
Inona no tokony ho fantatra momba ny lalàna manokan'ny Firenena Mikambana Fitsipika
Amin'ity Ask the Admin ity dia hanome tari-dalana momba izay tokony ho fantatra momba ny fitsipika vaovao ianao. Ny orinasa rehetra mifandraika amin'ny olan'ny data ao amin'ny EU, na dia ireo tsy ao amin'ny Vondrona Eoropeana aza, dia mila manaraka ny lalàna iraisam-pirenena momba ny fiarovana ny tontolo iainana EU (GDPR).
Windows 10 Soso-kevitra: Manova ny MBR Partition amin'ny GPT tsy handao Data
Ny MBR (Master Boot Record) dia matetika ampiasaina fomba fampisaraka amin'ny rafitra Windows. Mbola manohana ny karazana BIOS sy ny karazana UEFI. Saingy ny tsy fisian'ny fahafaha-mihazona ny fitehirizana dia manome tsikelikely ny làlana mankany amin'ny GPT (GUID Partition Table) izay manome fiarovana mivaingana ihany koa.
'Super Smash Bros.' Ny Nintendo Switch Port Amiibo dia maneho ny tarehintsoratra vaovao ao amin'ny New One
Fotoana vitsy monja taorian'ny nahenoanay vaovao na tsaho momba ny Super Smash Bros. port ho an'ny Nintendo Switch fa ny lisitry ny lisitry ny lisitry ny amiibo hafa dia mety tsy ho fanesorana afa-tsy ny varavaran-daty famoahana fa ny toetra vaovao. Araka ny voalazan'ny officiel Nintendo of ...
Ahoana no hanamboarana sora-baventy amin'ny kapila microSD?
Indraindray ianao dia mety hamoy ny angon-drakitra manan-danja avy amin'ny karatra MicroSD na pen drive. Amin'io toe-javatra io, ny ankamaroan'ny olona dia te-hahafantatra dingana mora hanamboarana karatra MicroSD na kapila penitra raha tsy manary ny angon-drakitra. Ny tena fantatsika rehetra dia ny karatra MicroSD ...
Elasticsearch sy Kibana: fametrahana sy fampiasana fototra ao amin'ny Ubuntu 16.04
Elasticsearch sy Kibana: fametrahana sy fampiasana fototra ao amin'ny Ubuntu 16.04 Elasticsearch dia fitaovam-pangataham-pitaterana maimaim-poana voasoratra any Java ary tena mahery. Azo ampiasaina ho toy ny milina fikarohana an-tariby ho an'ny tranonkala na ho toy ny milina fikarohana ho an'ny fampiharana tranonkala e-commerce. ...
Ny mpikaroka dia afaka mamaky ny ADN 215 ao anaty ADN iray monja
Efa noresahinay aloha ny vaovao momba ny mety sy ny fampandrosoana ny tahiry ADN eto amin'ny HEXUS. Androany dia nianatra momba ny fandrosoana manan-danja amin'ny teknolojia izay natsangana hampandroso ny teknolojia fitehirizana ny ADN hahatakatra ny tanjaka feno amin'ny fahafaha-manao sy ny fahaiza-manao.
Ahoana ny famerenana mamandrika iPhone
Ny famerenana amin'ny iPhone dia hamerina azy indray any amin'ny sehatra voalohany. Miankina amin'ny safidy resetanao safidy, ny iPhone anao dia afaka mamerina mamadika ny sehatra manokana, mamafa ny angon-drakitra sy ny votoatiny, na mamerina amin'ny laoniny indray ny telefaoninao, toy ny hoe ...
Ahoana ny fomba hamerenana ny rakitra avy amin'ny USB na Hard drive tsy azo hidirana
Ny fiara mafy orina simba na simba dia afaka manoritra loza ho anao sy mety ho an'ny orinasa iray manontolo, indrindra raha tsy mahavita mamorona rakitra backup ianao. Na dia izany aza dia mbola misy fanantenana ho an'ny USB na ny fiara tsy simba na tsy azo idirana. Ianao dia afaka …
Gah, ny tabakao dia nanipika hafatra fotsiny tao Firefox
Ahoana ny fomba hamonjena haingana ny 2 GB ny toerana fitehirizana ao amin'ny iPhone na iPad vaovao
Ity tweak ity dia manaisotra ireo tweets nibaribary avy amin'ny Twitter Feed News
Ahoana no hanangonana ny varavarankely Safari ho an'ny iray amin'ny Mac
Nike manangana bitsika vaovao amin'ny Apple Watch, Apple dia mamoaka ny "Sports Loop" (PRODUCT) RED
Ahoana ny fandikana kilometatra sy kilaometatra amin'ny fampiharana Health and Workout amin'ny iPhone sy Apple?
Navoaka tamin'ny herinandro ho avy ny marika «Red Magic Mars», ny teboka maneho ny S845 chipset
Gazety ho an'ny Gazepad Pro
Samsung Galaxy Note9 Pure White tonga amin'ny Novambra 23
Tranok'era dimy-cam Nokia 9 mitatatra amin'ny CAD
Realme U1 tonga tamin'ny Novambra 28 ho Amazon Exclusive
Dia nifady hanina: GPUs dia mihenina haingana ny 600 HPC Apps
Microsoft Security Advisory ho an'ny fanodikodinan'ny tena
Squoosh dia fitaovana fanesorana sary an-tserasera amin'ny Google
Ahoana ny fametrahana Desktop Cinnamon 4.0 amin'ny alàlan'ny PPA ao amin'ny Ubuntu 18.04
Ahoana ny famerenana ny tenimiafina Windows 10 raha tsy mametraka ilay disk?
Miverena amin'ny dikan-teny taloha an'ny Windows 10 Aorian'ny andro 10
nbsp finday avo lenta Ubuntu 14.04 HTML Windows 8 Database ram Fitaovana finday PPA lalao SSD Android Twitter command line fanamarinana Ubuntu (rafitra fandidiana) vaovao farany OS X Microsoft Windows Server Apple Watch endri-javatra PHP WordPress takelaka fikirakirana taona SEO Screen windows update Command GNOME Apps fitaovana Time Company Samsung Galaxy MAMAKA CentOS 7 HTTPS HTTP raki-daza YouTube IP adiresy toe-tsaina bilaogy Toetoetra Unité centrale One ' Bing Phone Ubuntu 14.10 famerenana web browser Linux Ubuntu Systems ubuntu 15.04 10 fikarohana Plugins Windows 10 fitaovana Users famotsorana bilaogy MySQL tahirin-kevitra Debian fifamoivoizana Windows Phone Facebook Unix Linux Google Nginx SSH Chrome File app store fitaovana finday Up " Samsung Linux Mint Ubuntu Rafitra fikirakirana lalao Microsoft USB fitaovana Plugin 'App Cortana PDG Malagasy Bible loharano misokatra Windows web server Ubuntu 16 rafitra Video CentOS hametraka rindrambaiko "PC Firefox Apache iPhone Support haino aman-jery sosialy afa-po 04 API paoma